လေယာဉ်ပျံ (Uncategorized) - Rikoooo
Beechcraft ကို T-34C Turbo ဆရာ FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 33.3 ကို MB
ဤသည် add-on ကိုသာ FS2004 အဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာပြည့်စုံ ALPHASIM ကို T-34C လေယာဉ်များဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ပြုပြင်ထားသော 2D- နှင့် VC ကို-ပြား, airfile, aircraft.cfg နှင့်စနစ်အလုပ်ဆောင်ချက်တွေနှင့်ပျက်ကွက် module တွေထည့်သွင်းတွေနဲ့အတူ။ အဆိုပါ panel က layout ကိုနှင့် system ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအလွန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုံးစံ gauge နှင့်အတူတိုးတက်ပြီ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Detlev Rohmer အားဖြင့် updated Alphasim / Virtavia,
Ilyushin Il-76 MD FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 248 ကို MB
ဤတွင်အလွန်မြင့်မားအရည်အသွေး FS76 တစ်ခု Ilyushin Il-2004 MD, အပြည့်အဝ 3D နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, HD, ထူးခြားတဲ့အလုပ်အတွက် gauge နှင့်အတူလုပ်ပါတယ်ကို virtual cockpit ပါ! တစ်ခုပင်ခဝါသည်ဗားရှင်း package.For complete FSX hereAt ယခုအချိန်တွင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, သောသင်လုပ်နိုင်ရုရှားအတွက်တဦးတည်းထက်အခြားအဘယ်သူမျှမစာရွက်စာတမ်းများလည်းမရှိ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Ilya Kulikov (Monumentum), Kirill Konovalov, ဒင်းနစ်မြို့ပြ
PWDT စေ L-410 Turbolet FS2004 ဒေါင်းလုပ်
ထုံးစံ gauges.The စေ L-410 Turbolet ခကျြကထုတ်လုပ်မယ့်အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ် Short-range ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းသည်နှင့်အတူအလွန်ကောင်းတဲ့အတွက် add-on FS2004 များအတွက်ပါစေ L-410 Turbolet ၏ကို virtual cockpit နဲ့ထုံးစံနှင့်အတူလေးမတူညီတဲ့ဗားရှင်းထည့်သွင်းအသံ အများအားဖြင့်ခရီးသည်များအတွက်အသုံးပြုလေယာဉ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုန်အံ့, ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Pannon Wing ဒီဇိုင်းအဖွဲ့
Ilyushin Il-76 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 96.6 ကို MB
တင့်တယ် (အရေးပေါ်အခြေအနေများနှင့်ရုရှားရုရှားန်ကြီးဌာန - လေတပ်) နှစ်ခုမော်ဒယ်များ (MD နဲ့ TD) အပါအဝင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုထဲမှာဒီဇိုင်းကဒီလေယာဉ်ပျံ၏မော်ဒယ်, ထုံးစံအသံနှစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Animation, ညဉ့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ရှုပ်ထွေးသော 2D panel ကို (အဘယ်သူမျှမ VC ကို) မျိုးစုံအမြင်များ, ရုရှမှာ PDF ကိုလက်စွဲနှင့်အတူ (ရှိနိုင်ပါသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Sestak Oleg, Nikolai Sukhikh
ဒေါက်ဂလပ် B-66 Destroyer FS2004 ဒေါင်းလုပ်
အတွက် FSX & P3D သဟဇာတဖြစ်သော version ကိုဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။ ယခု payperware ကိုယခုအခမဲ့လုပ်နိုင်သည်။ ဤ add-on သည် custom-gaug အပါအဝင် virtual cockpit နှင့် 66d panel ပါ ၀ င်သည့် B-2 Destroyer ၏ပြီးပြည့်စုံသော package တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေါက်ဂလပ် B-66 Destroyer သည်အမေရိကန်မဟာဗျူဟာမြောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ်ဖြစ်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
PWDT Zlin Z-43 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
ဒီလေယာဉ်ပျံ FSDS 2.24 သုံးပြီးဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတူရိယာများနှင့်လေယာဉ်အလင်းရောင်နှင့်အတူလှုပ်ရှားတက်ကြွနှိပ်လို့ရတဲ့ကို virtual cockpit အပါအဝင် - ဤအချက်ကိုကြားမှမှာ, သင်သာ gmax ဖန်တီးမော်ဒယ်တွေအတွက်ရရှိနိုင်အများအပြား features တွေကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်တိုင်းကျအထွာ Z-43, includi အလွန်လက်တွေ့ကျခြင်း simulation ပေး ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရော်ဘင် DR400 Regents FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 4.99 ကို MB
Add-on 2D panel ကိုနှင့်ပြီးပြည့်စုံ VC ကိုအလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေး, ဒီလေယာဉ် F-GNNK မှတ်ပုံတင်ထူးခြားတဲ့ livery နှင့်အတူကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် Yannick there.Modeling ပျံသန်းကျောင်းများတွင်အသုံးပြုအရှိဆုံးကျယ်ပြန့်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ပြင်သစ်လေယာဉ်မှူးများ၏အများစုဖြစ်နိုင်ရော်ဘင် DR.400 အနည်းဆုံးနာရီအနည်းငယ်ရှိ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Yannick Lavigne, Fred သည် Banting, ရော့လူငယ်အဲရစ် Dante Jean-ierre Bourgeois
Northrop B-2A ဝိညာဉ်တော်သည် AlphaSim FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 10 189
Size: 10.8 ကို MB
အတွက် FSX/P3D ဗားရှင်းအရည်အသွေးကိုဟောင်း payware ၏ hereLitle အံ့ဩခြင်းကလစ်နှိပ်ပါယခုမူကားအခမဲ့! က virtual B-52 တစ်ဦးကို virtual cockpit နဲ့ထုံးစံအသံရှိပါတယ်။ စစ်မှန်သောစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်ကိုးကား! (ထို့ပြင် Stealth ဗုံးကြဲလေယာဉ်အဖြစ်လူသိများ) ကို Readme.txtThe Northrop Grumman B-2 ဝိညာဉ်တော်သည်တစ်ဦးအမေရိကန်မဟာဗျူဟာမြောက် bom ဖြစ်ပါတယ် more ... ဆက်ဖတ်ရန်
Socata TB10 တိုဘာဂိုအပြည့်အဝ Package ကို FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 9,6 ကို MB
အတွက် FSX သဟဇာတဗားရှင်း FS2004 များအတွက်စိတ်တိုင်းကျ gauge နဲ့အသံနှင့်အတူ hereIncluding Dynamic VC ကို click လုပ်ပါ။ Socata တီဘီ၏အကွာအဝေးအိုမင်း Morane-Saulnier ဝိုင်းရံကြဖို့အစားထိုးအလယ်ပိုင်း 1970s အတွက်ပဋိသန္ဓေယူခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကအပန်းဖြေခရီးသွားဘို့အလင်းလေယာဉ်ပျံများမှာသို့မဟုတ် business.The တီဘီ-10 တိုဘာဂိုလေယာဉ်ပျံတစ်ဦးကအရပ်သားဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
Scottish လေကြောင်းခွေးဘီလူး T. MK1 သင်တန်းပေး FS2004 ဒေါင်းလုပ်
သင်ဤ add-on အဘို့အလိုလျှင် FSX hereThis လေယာဉ်ပျံအပြည့်အဝ FS animations တွေကိုရှိပြီးကလစ်နှိပ်ပါ။ တောက်ပဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အချို့သောထုံးစံ gauge နှင့်အတူ Virtual cockpit ။ RAF, မောလ်၎င်း, ဆွီဒင်ဆေးသုတ်အစီအစဉ်များ, ကိုယ်ပိုင် SK ကို-61 model.The စကော့တလန်လေကြောင်းခွေးဘီလူးဗြိတိသျှ Two-ထိုင်ခုံဘက်ဖြစ်ပါသည်ရှိခြင်းဆှီဒငျအစီအစဉ်လည်းပါဝင်သည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ တိ Piglet Conrad - Piglet ရဲ့ထူးခြားသောလေယာဉ်
Rockwell B-1B Lancer AlphaSim FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 8 156
Size: 21.79 ကို MB
အတွက် FSX သဟဇာတဗားရှင်း hereThe Rockwell B-1 Lancer ဗုံးခွဲသူဟာ 1970s အတွက်အမေရိကန်ကတီထွင်တဲ့တာဝေးပစ်နှင့် variable ကိုဂျီသြမေတြီသည်အကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒါဟာ 100 မိတ္တူ built-in များနှင့် 2012 နှင့်အတူ 4.Included အတွက်ဝန်ဆောင်မှုဆဲဖြစ်ပါတယ်ခဲ့ထုံးစံအသံကို virtual cockpit နဲ့ဗုံး drop နိုင်စွမ်း repaints ။ Exce ... ဆက်ဖတ်ရန်
Concorde နောက်ဆုံးဗားရှင်း-A 2011 FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
အတွက် FSX သဟဇာတမူကွဲဤတွင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါပါဝင်သည်ရာ Concorde သစ် 3d မော်ဒယ်ဖြစ်ပါသည်: အသစ်တစ်ခုကိုနှာခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်, visor အသေးစိတ်ပျံသန်းဒိုင်းနမစ်, ပြည့်စုံမှန်ကန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအထုပ် -new မစမီ-PRODUCTION texture- VC ကိုပြားများအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, wings' vortices များအတွက်အထူးသက်ရောက်မှုများနှင့် မြူ, effec afterburner ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Libardo Guzman
ဗြိတိန်နိုင်ငံကလေကြောင်း Jetstream 31 / 32 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 10.49 ကို MB
အတွက် FSX သဟဇာတမူကွဲ hereComplete Jetstream 31 နှင့် 32 ကိုကလစ်နှိပ်ပါ! FS2004 များအတွက် native, ဒိန်းမတ်၏ Sun က-Air လေကြောင်းလိုင်း, အရှေ့လေကြောင်းလိုင်း (ဗြိတိန်), ယူနိုက်တက် Express ကို (သမိုင်း), တော်ဝင်ရေတပ် T3 အဖြစ် repaints ထုံးစံအသံယာဉ် 2D နှင့် 4D နှင့်3ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ instructions.The Jetstream 31 Read သေးငယ်တဲ့အမွှာ-turbo ဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
Aero တပ်မှူး 560A FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads:5844
Size: 9.88 ကို MB
Add-on ကိုအလွန်မြင့်မားအရည်အသွေးနှင့်ပြည့်စုံ, ကောင်းစွာမျှတည်ထားပါ communityFeatures အားဖြင့်လူသိများ: GMAX Built အပြည့်အဝကာတွန်းထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်များ, အလင်းအိမ်, ခရီးသည်တင်တံခါး, ကုန်တင်တံခါးကိုဘီးနှင့်တာယာ Rolling အပြည့်အဝကာတွန်းရပ်ဆိုင်းမှုအစိတ်အပိုင်းများကိုတိကျမှန်ကန်သော STOL ပျံသန်းဒိုင်းနမစ် (အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကလေယာဉ်မှူးများကစမ်းသပ်ခံရ .. ။ ဆက်ဖတ်ရန်
SCS Tu-134A v1.2 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads:7800
Size: 47.77 ကို MB
အဆိုပါ Tupolev Tu-134 (နေတိုး code ကို Crusty) ကိုအမေရိကန်ဒေါက်ဂလပ်က DC-9 ဆင်တူတဲ့အရပ်သားလေယာဉ်အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်ဆိုဗီယက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကဝါဆောစာချုပ်ကိုအများစုနိုင်ငံများတွင်အသုံးပြုတဲ့လေယာဉ်တဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုအတွက်လေယာဉ်ပျံအရေအတွက်သောကွောငျ့ noise.Tu-134A ကန့်သတ်စည်းမျဉ်းများလျော့ကျလာသည်ဒုတိယအ vers ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဆိုဗီယက်ဂန္တဝင်ခြင်း simulation